I-China Wireless Controller ye-PS4, i-Replacement ye-PS4 Controller kunye ne-Built-in 1000mAh Ibhetri eHlaziywayo (igolide) imveliso kunye nabavelisi |Mcldosly
Ubungakanani: 15 * 10 * 5 CM
Ubunzima: 197.3 g
Ubomi bebhetri: Iiyure ze-5-8
Ixesha lokutshaja: 2-3 iiyure
Ixesha lokulinda: Iinyanga ezi-2
Uluvo: I-Axis emithandathu
Umgama wokuSebenza: 33ft/10m
I-RIIKUNTEK i-Wireless Controller ye-PS4
Umlawuli ongenazintambo wamkela iteknoloji yoxhulumaniso lweBluetooth, enokuhambelana okubanzi, uxhumano oluzinzileyo kunye ne-33 FT umgama wokudibanisa.Ifanelekile kwi-Playstation 4 / Pro / Slim, i-PC, i-Android, i-IOS 13, kunye nezinye izixhobo ezenziwe ngeBluetooth.Vumela ukonwabele ubumnandi bomdlalo.
Nceda uqaphele: I-RIIKUNTEK i-Wireless Controller ayingomlawuli osemthethweni.
IGraffiti ekhethekileyo kunye neyoMntu
Umphandle wesilawuli esingenazingcingo sigqunywe ngeepatheni ezipholileyo zegraffiti, ezinemibala kunye nomntu.Kukho umahluko othile kwipatheni yesilawuli esingenazingcingo.Awuyi kubhidanisa umlawuli xa udlala imidlalo kunye neqabane.Isipho esigqibeleleyo kusapho kunye nabahlobo.
Uyilo lwe-ergonomic lukuvumela ukuba ucofe amaqhosha esenzo esibuthathaka ngokuchanekileyo nangokulula, ukucinezela nje ukukhanya, umlawuli uya kuthi ngoko nangoko anike ingxelo kumdlalo, enciphisa umngcipheko weempazamo zokusebenza.
I-360 ° Joystick kunye ne-Six-Axis Sensor ikuvumela ukuba ulawule ngokuchanekileyo intshukumo yomlinganiswa womdlalo, uvelana nomlingiswa, kwaye uzintywilisele kwihlabathi lomdlalo.
Isilawuli esingenazingcingo sineenjini ezimbini ezakhelwe ngaphakathi, ezibonelela ngamanqanaba ahlukeneyo eziphumo zokungcangcazela ekudubuleni, edabini, nakwimidlalo eyoyikisayo, enikezela umoya womdlalo kunye nokwandisa ingqiqo yokuthatha indawo.
Enye indlela yokudlala
Ukuchukumisa isikrini esichukumisayo sibonelela ngenye indlela yolawulo yabalinganiswa bomdlalo.Ulawulo lwesikrini esichukumisayo kunye nolawulo lwenduku yokudlala inokutshintshwa ngokuthanda.
Nceda uqaphele ukuba imisebenzi ethile yesikrini sokuchukumisa ixhomekeke kumdlalo.
Yabelana ngeMood Yakho
Iqhosha elithi "Yabelana" linokwabelana ngerekhodi lakho lomdlalo, imo, amava kwisoftware yoluntu, kwaye unxibelelane nabadlali bomdlalo malunga nolonwabo lomdlalo.
PS4 iConsole Connection
1.Inyathelo loku-1: Vula i-console ye-PS4 kwaye uyidibanise nomlawuli we-PS4 (Off state) ngokusebenzisa intambo ye-USB.
I-2.Inyathelo lesi-2: Cofa iqhosha laseKhaya, kunye ne-RGB ye-LED yokukhanya kwebar yesalathisi.Xa uxhulumaniso luphumelele, ibha yokukhanya kwe-LED iya kuhlala ivuliwe.
3.Inyathelo lesi-3: Khipha intambo ye-USB, kwaye ungawonwabela umdlalo kunye nesilawuli ngaphandle kwamacingo ngobuchwepheshe beBluetooth.
Cima iqhosha laseKhaya kwimizuzwana eyi-10, emva koko umlawuli uya kucima.
Qhagamshela kwakhona: Cofa iqhosha lasekhaya, isilawuli sePS4 siya kuqhagamshela ngokuzenzekelayo kwikhonsoli ngaphandle kwentambo ye-USB kwakhona.
Android / IOS13 / PC Connection
1.Inyathelo loku-1: Vula ibluetooth yesixhobo.
I-2.Inyathelo lesi-2: Cinezela kwaye ubambe iqhosha le-SHARE kunye ne-HOME ngexesha elifanayo kwi-3-5 imizuzwana, ukukhanya kwesalathisi kuya kukhanya ngokukhawuleza.
3.Inyathelo lesi-3: Khetha "DUALSHOCK 4 Wireless Controller"/"Wireless Controller" kuluhlu lweBluetooth.Isibane sesalathisi siya kuhlala sikhanyisa ukubonisa uqhagamshelo oluyimpumelelo.
Nceda Qaphela: I-PC kufuneka ifake umqhubi ukusebenzisa isilawuli esingenazingcingo.
Ngaphambili: I-DOSLY Wireless Controller Iyahambelana ne-PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IOS 13 ene-Dual Vibration, Touch Pad,Bluetooth,i-Headset Jack Jack, iSix Axis Motion Control, iOrenji etshajwayo kwakhona.
Okulandelayo: I-PS4 yoMlawuli ongenazingcingo, uPhucula iGamepad eRemote eTshajwayo kwi-Playstation 4/Slim/Pro Console/PC Game with Dual Shock, Touch Pad kunye ne-USB Cable Thumb Grip Cap (Blue)
PS3 isilawuli Wireless 2 Pack Double Shock Gam...
Ukutshintshwa koMlawuli oSebenzayo kwiNintendo...
PS4 Controller Game Controller for PS4 Wireless...
Umlawuli ongenazingcingo weNintendo Joycon switch,...